Ny paiso rakena - Astuces de Grand-mères malagasy
par Tatiana Razanadraibe	 7 novembre 2018 Écrire un commentaire
Ny paiso rakena dia anisany voakazo tena vokatra tokoa raha eto amintsika. Anisan’ny ireo manamarika ny vanimpotonanan’ny krismasy sy taombaovao ny fahavokaran’izy io. Maro ny tombotsoa azo avy aminy. Ireto ary misy fomba maromaro azo atao aminy eo amin’ny lafiny ara-tsakafo:
Afaka atao zava-pisotro na (jus) na divay.
Afaka atao confiture ihany koa.
Azo atao dessert na tsindrin-tsakafo.
Ity ary ny fomba fanamboarana ilay confiture :
Fanamboarana confiture paiso rakena
Ireo akora ilaina :
Ny fanaovana azy :
Ireo akora ilaina
Ny fanaovana azy
1 kg ny paiso ;
1 kg siramamy.
Sasana ny paiso dia zaraina roa na efatra, atao ao anaty vilany eo ambony afo malefaka ny paiso sy ny siramamy, tsy asiana rano fa miteradrano izy rehefa avy nosasana iny.
Aroaroana matetika mba tsy hiraikitra amin’ny vilany mandrapahatongany marihitra mitovy amin’ny caramel. Marihina fa rehefa toy ny caramel izy dia afaka hampirimina mandritry ny herinandro.
Ampangatsiahina dia vita. Afaka ampiana citron kely na cannelle na vanille arak’izay tiana atao aminy.
Raha atao divay indray kosa dia fomba hafa no anaovana azy :
Tetehina na mixena ny paiso efa voavofy.
Lomana siramamy mandifotra azy, tsy asina rano mihitsy fa lasa ranony le siramamy io.
Alona mandritra ny adin’iray na adin’ny roa.
Rehefa vita izay dia fihazana ao anaty voaly kely na lamba manify, dia atao ao anaty tavoahangy ny ranon’ny paiso azo eo.
Hidina tsara avy eo, dia tsy sokafana mihitsy raha tsy hosotroina afaka roa andro na herinandro eo.
Ny faikan’ilay paiso avy nakana ranony dia afaka andrahoina ka asina siramamy dia lasa confiture koa.
Ny sakamalaho na sakay tany
astuce de grand-mère, confiture paiso, divay, jus paiso, paiso
Article précédent : Les candidats à l’élection présidentielle malgache de 2018 et leurs programmes
Macaroni aux sardinesArticle suivant :